Ukhala ngobugebengu bezikhulu zamaphoyisa – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Ukhala ngobugebengu bezikhulu zamaphoyisa
UMnu uHluphuyise Sikhakhane othi angeke akuthole ukuphumula ingakabuyi itekisi yakhe
Itekisi ayelithenge lilisha lebiwa lagcina selinikezwa omunye usomatekisi owayenamaphepha awumkokotelo
SEKUPHELE iminyaka engama-20 asinda embhobheni wesibhamu edunwa itekisi ayesanda kulithenga ngabantu ababezishaya abagibeli kepha akalilahlile ithemba ngoba ufisa ukubona kwenzeka ubulungiswa kuleli cala akholwa ukuthi amaphoyisa awalisingathanga ngendlela netekisi yakhe yagcina ibuyiselwe kumuntu okungesiye.
UMnu uHluphuyise Japhet Sikhakhane oseneminyaka yobudala engama-79 uthi isigameko sangoMasingana ngowe-1998 sashintsha impilo yakhe ngoba itekisi wayezama ukuqhashalaza ngayo emuva kokuphuma emsebenzini. Noma kofundayo kuzwakala sengathi udaba lukaSikhakhane seluludala, sekumele agwinye itshe kodwa kuyena luvusa iminjunju ngoba ukholwa ukuthi amaphoyisa amenzela phansi eseyitholile itekisi yakhe ayinika omunye usomatekisi owayenamaphepha awumkokotelo ayo.
“Ngangihamba phakathi kweShowe noMgungundlovu ngesikhathi ngibona insizwa engiyaziyo emgwaqeni yakwaMsimango ngase ngiyimela ngoba ngaleso sikhathi ngangingalayishi. Ngathola ukuthi ihambisana nowesifazane ngabagibelisa bopbabili.,” kulandisa uSikhakhane obezifikele mathupha emahhovis elaboHlanga ngasekuqaleni kwesonto ngoba ethi yilona abona ukuthi lungaluthathe phanzulu udaba lwakhe.
“Kwabe sekugibela nabafana abathathu. Kuthe sesiphakathi nohambo bangashintshela bafuna la imoto okungangokuba omunye waze wabamba isiteringi kwanguye oshayelayo mina ngahlala phakathi nendawo esihlalweni sangaphambili.”
Uthi kwasuka esinamathambo bebanga isiteringi nemoto isiqala ukuphaphalaza le nsizwa yakwaMsimango nowesifazane ababegibele naye bagcina ngokwehla ngoba owesifazane wayesehayiza ebabaza umhlola ayewubona.
USikhakhane okubonakalayo ukuthi luyamthinta lolu daba uthi wayeselimele kakhulu bagcina bemlaxazile waze wakwazi ukuthola usizo esiteshini samaphoyisa eGingindlovu, nemoto yakhe iToyota Super 16 yahamba kanjalo. Uqhuba uthi emuva kwezinsukwana wathola umbiko wokuthi imoto yakhe isisebenzela oLundi futhi sebeyishintshe nombala obubomvu isiluhlaza okwesibhakabhaka.
Uthi udaba labikwa emaphoyiseni kwenziwa nezinhlelo zokuthi ayoyibona imoto. “Ngayibona ngesivalo sangaphambili ngoba sasenziwe emuva kokushayisa ngosuku eyaphuma ngalo egaraji.”
Uthi amaphoyisa wawakhombisa zonke izincwadi zayo, kodwa angafuna ukumbuyisela yona wezwa nangokuhamba kwesikhathi ukuthi icala selavalwa. Uthe ngokulandelela lolu daba wathola ukuthi imoto yakhe inikezwe omunye usomatekisi okungu Mnu uDaniel Mkhize. Uthi ilockbook namanye amaphepha emoto kwabe kukuyena yingakho ekholwa ukuthi amaphoyisa amenzela ubugebengu.
“Sengihambe wonke amahhovisi neminyango ngizama ukulungisa lolu daba kusuka lwenzeka kodwa angilutholi usizo. Namaqembu ezepolitiki sengawabikela kube khona izaba azenzayo kodwa agcine ehlulekile ukungisiza,” kuqhuba uSikhakhane ongowokuzalwa eNtumeni kodwa ohlala ehositela iDalton, eThekwini.
Uthi udaba waludlulisela kowayenguMvikeli Womphakathi uThuli Madonsela kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Uthi izikhulu zamaphoyisa zangaphambilini KwaZulu-Natal ziyalwazi udaba lwakhe. Kwenye incwadi eyasayiswa ngowanguKhomishana Wamaphoyisa esifundazweni uP.T. Brown uyavuma ukuthi imoto yabe ibomvu yase ishintshwa umbala yaluhlaza okwesibhakabhaka. UBrown uyavuma nokuthi ngesikhathi imoto inikezwa uMkhize akukho lapho kuvela khona ukuthi inombolo yenjini iyafana nalena ayekhuluma ngayo.
Ngesikhathi kuthintwa iHhovisi loMvikeli Womphakathi eThekwini ozibize ngoMphenyi wathi akagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba, uthe abasenawo amarekhodi odaba lukaSikhakhane. Uthe useke wabuza ngisho nakwababekhona esikhathini esedlule balulandula udaba.
Abezokuxhumana emaphoyiseni KwaZulu-Natal bathunyelwe imibuzo nemininingwane yonke kaSikhakhane nezitatimende ayezenza kusuka kwenzeke lesi sigameko kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokuloba bengaphenduli. Le nsizwa endala ithi ayisoze yakuthola ukuphumula ngetekisi layo elalizoshintsha impilo yonke yalo. Ithi isidinga noma yiluphi usizo ukuze ligcine livelile iqiniso. Ekulandeleleni lolu daba ozulazayithole bathole ukuthi uMnu uMkhize okuthiwa wagcina kunguye owathatha leli tekisi kuvele ukuthi washona eminyakeni edlule.